ISycheonman Bay Eco-Museum
IZiko loLondolozo lwembali eSuncheonman Bay Eco-Museum lasekwa ukubonelela ngendawo yophando kunye nemfundo ukugcina indawo yendalo. Ubume bonyaka wonke buvulelekile eluntwini nakwizindlu zeholo yemiboniso, igalari, iqonga lemidlalo yeqonga, kunye namagumbi endibano ... ...
I-Seokguram, ebekwe kwiNtaba yeTohamsan, yitempile yamatye eseKorea. Igama laseburhulumenteni laseSeokguram, uNondyebo weSizwe onguNombolo 24, nguSeokguram Seokgul. Yakhelwe ukuba ibe yiNdawo yeLifa leNkcubeko yeHlabathi yi-UNESCO ngo-1995, yitempile eyakhiwe ngamatshe eyenziwe ngegranite ...…
Idrafti yoyilo lweDongdaemun
I-Dongdaemun Design Plaza (DDP) inentsingiselo yePhupha, uyilo, kunye noMdlalo. Inemiboniso eyahlukeneyo, imiboniso bhanyabhanya, iiforamu, iinkomfa, kunye neminye iminyhadala yasekhaya nakwamanye amazwe…
Ukuba ulandela iNational Road Nombolo 15 ukusuka kuMyuziyam iM bamboo, uyakufumana indawo entle entle exubeneyo ebonakalayo ngathi iphume ngqo kwi-fairytale. Le ndawo ingafumaneki yindawo ehamba ne-Metasequoia-...
Indawo yezembali yeGeoje, Inkampu yePOW
Ipaki yeGeojedo, Inkampu yePOW yakhiwa ukubamba amabanjwa ngexesha leMfazwe yaseKorea. Inani lamabanjwa asemkhosini ayi-170,000, angama-20,000, 150,000 ayephuma eTshayina, ali-XNUMX evela eNyakatho Korea.
I-Aqueum ye-COEX iqulathe iitanki zokubonisa ezili-183 kunye neetanki zokuzala ezingama-90 zeetoni zamanzi ezingama-3,500 40,000, ukuyenza ukuba ibe ngumanzi omkhulu otyhidiweyo. Ihlala izidalwa zaselwandle ezingama-650, ezivela kwiintlobo ezingama-16 ezahlukeneyo ezahlulwe zayindawo eyi-XNUMX ... ...
Ifumaneka embindini weSeoul, i-Korea House yindawo yokundwendwela abakhenkethi njengendawo yenkcubeko eyahlukeneyo enikezela ukutya kwasebukhosini kunye nokusebenza kobugcisa bemveli, amava enkcubeko yesiqhelo, umsitho womtshato wesintu, kunye neminye imisebenzi abatyeleli abanokuziva ngayo eKorea. ubuhle ...…
Ikhonkco eliLungisiweyo leBusan-Geoje Fixed ((iGeoga Bridge) ngumgama oziikhilomitha ezisisi-8.2 (5.1 mi) umda osisinhanha oxhuma isixeko saseKorea iBusan kwiSiqithi seGeoje. Igama le bhulorho yiGeoga Bridge (거가 대교)…
Ipaki yeLoliwe yaseGangchon
Xa ulayini we-Gyeongchun, uloliwe ohamba ngokulandelelana odibanisa i-Seoul kunye neChuncheon, wavula nge-20 kaDisemba ngo-2010, endaweni ka-Mugunghwa uloliwe uhambe kule ndlela iminyaka engama-70 ...…